U-Ellicott umemezela ubuchwepheshe obusha bokudanisa - I-Ellicott Dredges Blog
I-ELLICOTT ®INTERNATIONAL ANNOUNCES I-New DREDGING TEKNOLOGY YOKUQEDA ISIVIVINYO SOKUFUNDA
I-dredge esebenza kalula kunazo zonke ezake zakhiwa. Ukukhuphuka okusha kwe-8-inch (203 mm), i-dgingge dwardge kagesi (swinging laddering dredge (SLD)) yokulungiswa kabusha kwezinsimbi nokulungiswa kwamachibi ngezimoto ezintathu (3) zokuhamba ze-spud, ngaphandle kokusebenzisa izintambo.
Ellicott® I-International, umenzi ohamba phambili we-dredge dredges yemvelo, umemezela uhlobo olusha lwe-dredge oluhamba lodwa. I-dredge iqhubekela kuma-spuds amathathu ahambayo noma izinqola ezijikelezayo ezivumela ukuba ihlale ikwesimo esiqondile ngaso sonke isikhathi ngoba kuhlale kukhona ama-spuds abambeke ngokuqinile phansi. Ihamba nama-spuds ngenkathi isantanta ngaphezulu. Lokhu kubeka kuvumela umsiki ukuthi aqhubekele phambili ekusikeni okulandelayo ngaphandle kokulahlekelwa isikhundla. Lobu buchwepheshe bufanayo bunika amandla i-dredge ukubuyela emuva emuva ukuze ilande izinto ezingcolisiwe okungenzeka ukuthi i-dredging ilahlekile kodwa ihlala isendaweni efanayo yokuqhubeka nokususa phambili.
I-Ellicott® Brand swinging ladder dredge entsha ene-3 ehamba ngezimoto ezihamba nge-spud ngaphandle kokusebenzisa izintambo.
I-dredge entsha inesikweletu sokudonsela phansi nokubeka endaweni ethile ikakhulukazi emifuleni lapho kunemisinga. Lapho imingcele ejwayelekile isengozini yokulahlekelwa isikhundla sayo ngenxa yemijikelezo, lena ayikho. Azikho izintambo zokusebenzisa ukwakhiwa komzimba futhi ngenxa yalokho azikho izintambo zokufaka izidakamizwa ezingcolile ezibangela ukungasebenzi okungafuneki. Ngisho ne-stern spud inesici esisebenza phansi esinika amandla okubamba ubengene phansi.
I-Ellicott® i-brand dredge ifakwe i-valve ekhethekile yokusiza ngaphansi kwamanzi evimbela ukuxhumeka kolayini futhi ivumela inani eliqondile lezinto ezingcolisiwe ukuthi lipomfwe ngokungaguquguquki, kungakhathalekile ukuthi isesimweni esingezansi senzika. Ezimweni eziningi, ikakhulukazi ezindaweni zemifula, ukungcola akukhona nje kuphela ezinsikeni kodwa futhi nangokufuduka ezindaweni ezinesihlabathi noma zobumba zangempela. Umsiki we-dredge unamandla anele okususa lokhu kungcoliswa kungqimba oluncane. Iyunithi ingasusa izidalwa ekujuleni kwamamitha ayi-22 (7 m) ngaphansi kwamanzi.
Iyunithi inokulawula okutshela opharetha we-dredge kahle ukuthi iyiphi isendlalelo esikuyo. Isisuli singakwazi ukungena ekuvumeleni kwe-inch noma i-intshi eyodwa (25 mm) esibucayi, ikakhulukazi ezincekelweni ezingcolile. Izilawuli zomsebenzisi zigcina ukumiswa kabusha kokudonsela emuva kukholamu yamanzi kube ubuncane ngokuphelele. Yonke imisebenzi ye-dredge ixhumene nezinhlelo zokuma komhlaba jikelele.
Le dredge dredge dredge yemvelo ingukuthuthuka kokuqala okukhulu kusetshenziswa lolu hlobo lobuchwepheshe eminyakeni eminingi. Lawa ama-Ellicott® AmaBrand Swinging Ladder dredges angasetshenziswa emachibini nasemiseleni emincane efana nezinkulungwane zamamayela amamisele eFlorida azodinga ukwehliswa. Ellicott® I-International ineyunithi elilodwa manje elisebenza endaweni ephakathi nentshonalanga ye-USA.
Yomibili imisebenzi yesitebhisi - ukujija nokukhuphula / ukwehlisa - ilawulwa yizinqama ezibacindezela. Ngenxa yokuthi inqama ephakamisa futhi yehlise isitebhisi ingafaka amandla asezansi kumsiki, iqinisekisa ukuthi umsiki uthintana ngokugcwele nenhlabathi engcolisiwe ngaso sonke isikhathi futhi ayishayisani, okungadala ukungqubuzana okungathandeki.
I-dredge itholakala kokugeleza kokukhipha kwe-1,500 kuya kumalitha we-6,000 / umzuzu (i-5,700 kuya kumalitha / umzuzu we-22,700). Isebenzisana kakhulu nezinqubo zokwelapha udoti ezingcolile ngenxa yamaphesenti anembile okufiphala ohlelweni lwamapayipi ngokufana.
I-dredge iyasebenza kakhulu ukuthi ingenza ukujika kwesobunxele nangakwesobunxele, ibuyise emuva, futhi ipaki elihambisana nayo ngokwayo kufana nokupaka imoto. I-dredge ingaba idizili noma igesi kagesi.
Ukuze uthole olunye ulwazi sicela uxhumane:
Paul Quinn, Umqondisi Wezokuthengisa